Sida loo dar subtitles in MP4 Faylal ay ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
Raadinta hab ka kaaftoomi-free ku darto Cinwaan ah si aad ah MP4 video? Ma noqon doonto heshiis weyn, haddii aad ka heli software saxda ah. Tutorial Tani waxay ku tusi doona sida subtitles in lagu daro in videos MP4 ka hor inta aadan ogaan.
Qaybta 1aad: Sida loo dar subtitles bixi in aad MP4 video
Qeybta 2: Edit subtitles kuu gaar ah si ay u abuuraan a movie cusub MP4
Si aad ku shuban subtitles aad u doonayay inaan wax movie qaab aad leedahay, waxaan si weyn lagu talinayaa naga Video Converter Ultimate (Windows 8 taageeray). Sidaa daraadeed, waxaad ku dari kartaa subtitles in MP4 video mid lagu badbaadinayo in file video ah in gebi ahaanba meel kasta ciyaaro, ama gubasho in DVD loogu daawashada TV-ga. Dhamaan waxaa la samayn doonaa software. Waxaa loo baahan yahay No rakibidda qalabka dhinac saddexaad.
Waa maxay video iyo qaabab Cinwaan waxaa taageera?
Video qaabab: MP4 , AVI , MKV , wmv , Mpg, MPEG, VOB, TOD, mod, FLV , iyo dhammaan qaabab video joogto ah.
Qaabab Cinwaan: SRT , dameer , SSA
Ka dib helitaanka faylasha Cinwaan ka internet (inta badan files Cinwaan waa la .ass iyo kordhinta file .ssa.), Waxaan u baahan nahay isticmaali Video Converter (Windows 8 taageeray) inaad ku biirto Cinwaan la MP4 video galay file cusub ama gal DVD. Hadda raac tallaabo sahlan u dhigay subtitles on MP4 video hilaac.
Talaabada 1: Import MP4 aan subtitles
Ka dib markii ay ku rakiban Cinwaan si video Converter (Windows 8 taageeray), barnaamijka iyo dajiyaan aad MP4 video by jiidayeen video in daaqadaha hoose, ama adigoo gujinaya "Add Files" badhanka si ay u helaan MP4 video on your computer.
Tallaabo 2: Ku dar Cinwaan in MP4 video
Marka MP4 video tuso ilaa daaqadaha hoose, xaq waxa guji ka mid ah liiska iyo dooran "Edit" button in aan bilowno suuqa kala video sixiddiisa ah. Tag "Cinwaan" tab ugu sareysa. Markaasuu ku shuban dibadda files Cinwaan srt, SSA, dameer adigoo riixaya batoonka "+" in la furo liiska hoos-hoos Cinwaan. Ka dib markii Cinwaan waxaa ku raran yihiin, aad ku eegaan kartaa wakhti ku habboon la Cinwaan in daaqadaha Xiisaha Leh. Style default ayaa lagu dabaqo doonaa. By hubinta "T" doorasho ka sokow, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa style Cinwaan caado dhex font, midabka, size, booska, hufnaan, iwm Marka aad ku qanacsan tahay Cinwaan MP4 ah, guji "OK" badhanka si loo xaqiijiyo goobaha iyo soo laabtay si uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Waxaad sidoo kale soo shirtagi karto watermark text ama watermark image si aad MP4 video uu furmo suuqa kor ku xusan video tafatirka.
Talaabada 3: Dhoofinta MP4 video la MP4 Cinwaan ama gubi in DVD
Hadda waxa la joogaa wakhtigii si loo badbaadiyo Cinwaan in MP4 video joogto ah. Marka hore, doortaan qaab saarka la doonayo adigoo riixaya "Qaabka Output" doorasho dhinaca midig. Markaas, doortaan qaab video ama qaabab horena u iPhone, iPhone, iPod, iPad. Ugu dambeyntii, guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta. Cinwaan labaad waxay si joogto ah la qori doonaa on video wax soo saarka. Haddii aad rabto in aad ku gubi MP4 DVD in la Cinwaan, waxaad ku gubi karaa "Guba" interface.
Waxaad samayn. Iyadoo Video Converter , si aad u MP4 video ku dari kartaa subtitles u ciyaari doonto kombiyuutarka, qalab ama TV.
Qeybta 2: Edit subtitles kuu gaar ah si ay u abuuraan cusub MP4 movie
Si aad ku dari subtitles in aad diiwaan MP4 video clips, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) ka dhigayaa quruxsan fudud. Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa foom oo ah ballaaran qoraalka waxaad isticmaali kartaa in aad ku darto qoraalka sharaxaad fiican. Download tijaabo ah oo bilaash ah halkan:
Barnaamijkan waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac madal. Fadlan kala soo bixi version saxda ah sida nidaamka hawl gal. In socda, version Windows loo qaato sida tusaale.
Talaabada 1: dejinta ilaha MP4 files
Burcad barnaamijkan iyo dooro "16: 9" ama "4: 3" muuqa sida ay u galaan suuqa kala hoose. Markaas riix "Import" in ay ku shuban MP4 videos ka folder file aad on your computer. Ayaa laga keeno video clips ku tusi doonaa sida thumbnails in ay leeg- bidix.
Marka aad ku shuban dhammaan faylasha MP4 aad u baahan tahay, si fudud u jiidi oo iyaga hoos u Timeline Video ah.
Tallaabo 2: Ku dar subtitles in MP4 video oo astaysto
Hadda beddelaan qoraalka tab, ka dibna jiidi template aad jeceshahay in meesha aad rabto in aad Timeline ah. Haddaba waad arki doontaa thumbnail text akhriska "T" ah.
Double waxa guji si aad u hesho guddi editor qoraalka, halkan waxaad ku qor kartaa in aad qoraal u gaar ah, iyo astaysto font, midabka, animation ah, iwm sida aad jeceshahay. Ka dib markii in, guji Play icon inay ku eegaan saameynta-waqtiga dhabta ah.
Marka subtitles ku soo galay meesha saxda ah ee aad MP4 video, jiidi duration file Text si ay u hagaagsan aad video for . Dhanka kale, A Timeline Zoomer waxaa laga heli karaa Mozilla gudaha / dibedda Timeline in uu kaa caawiyo in aad si sax ah u heshaan meesha aad rabto.
Talaabada 3: dhoofinta filim cusub
Markii wax walba waa uu fiican yahay, ku dhacay "Abuur" inay u dhoofiyaan file a MP4 cusub waxaa ka mid ahaa iyadoo subtitles. In uu furmo suuqa wax soo saarka, waxaad dooran kartaa MP4 ka "Qaabka" tab, ama u tag "Qalabka" tab soo qaado icon qalabka sida "iPad" ah oo u badbaadin doonaa on your computer. Xitaa in aad la wadaagi karto abuurkiinna si toos ah YouTube, ama ku gubi in DVD disk ah.
Kor ku xusan laba hab oo ay gubaan subtitles in MP4 video idinka badbaadin doonaa waqti badan iyo dhibaato. Haddii u baahan tahay, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa video kale itusi la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) , sida beddesha , jar , jarid , qabsato dhalaalka, bedelkeeda, dalban music soo jeeda , kala guurka, saamaynta muuqaal ah iyo in ka badan. Sidaas, waxaad ka heli kartaa ugu files MP4 aad. Just download barnaamijka u leedahay in isku day ah. Waxaad ku jeclaan doonaa.
> Resource > MP4 > Sida loo dar subtitles in MP4 Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)